Ogaden News Agency (ONA) – Madax Katirsan JWXO oo Deegaano Shabeelle Katirsan Lagusoo Dhaweeyay.
Madax Katirsan JWXO oo Deegaano Shabeelle Katirsan Lagusoo Dhaweeyay.
Posted by Dulmane	/ September 11, 2018
Madax katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia oo indhawaalaba socdaalo xidhiidh ah ku galaa baxayay wadanka Ogadenia ayaa maalin nimadii shalay oo Isniin ahayd lagusoo dhaweeyay deegaano katirsan Gobolka Shabeelle ee wadanka Ogadenia.
Waftiga JWXO oo guud ahaan shacabka Soomaalida Ogadenia ay aad usoo dhaweeyeen ayaa shalay booqday deegaano dhowr ah oo ay kamid tahay Dagmada Boodh-caano ee galbeedka Gobolka Shabeelle, halkaas oo ay kula hadleen kumanaan shacabka Soomaalida Ogadenia kamid ah.
Wafiga Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa sidoo kale gaadhay deegaanka Bayaxow oo ah goobtii lagu hayay maxaabiistii ciidanka JWXO ee dhawaan maamulkii hore ee Ogadenia uu halkaas kusoo xero ooday. Waftiga JWXO ayaa deegaanka Bayaxow kula kulmay dad badan oo shacab ah.
Waftiga JWXO ayaa sidoo kale lagusoo dhaweeyay deegaanada Sanka-baar, Baarguun iyo Haar-kujoog halkaas oo ay kajeediyeen khudbado intabadan midnimada umada lagaga hadlayay.
Dadka shacabka ah oo umuuqday kuwo aad ugu ooman aragtida iyo latashiga saraakiisha JWXO ayaa luxayay caleemo qoyan iyo calkan JWXO oo mudo badan dartii dadka loolaynayay.
Waxaa meelo badan oo Ogadenia kamid ah kasocda abaabul aad ubalaadhan oo ay wadaan madaxda iyo xubnaha JWXO, waxaana socda wadatashiyo gudaha iyo dibada ah oo xal loogu raadinayo qadiyada Ogadenia.